Momba anay - INJIANG JIAN ER SHOES & GARMENTS CO., LTD.
❊JINJIANG JIAN ER SHOES & GARmentsS CO., LTD. dia naorina tamin'ny 2006 tao Jinjiang City any Shina. Manana traikefa fanaovana kiraro maherin'ny 15 taona isika.
❊Manana orinasa mpamokatra kiraro miaraka amina mpiasa 200 eo ho eo izahay. JianEr Shoes Compay dia manana tranobe 2, biraon'ny birao ny iray ary tranobe famokarana kiraro ny iray. Mirefy 6000 metatra toradroa ny velarany, ary manodidina ny 1.000 metatra toradroa ny kiraro showromm.
CompanyJianEr Shoes Company dia mamokatra kiraro kiraro mahazatra, kiraro mahazatra, kiraro fihazakazahana, kiraro fanatanjahan-tena, kiraro ivelany, kiraro baskety, kiraro kitra, baoty, kapa, misy kiraro lehilahy, kiraro vehivavy ary kiraro ankizy. Hatramin'izao, ny vokatra avoakanay isan'andro dia kiraro 1.500, tsiroaroa manodidina ny 50.000 isam-bolana.
❊Misy maody maherin'ny 5000 aseho ao amin'ny efitrano fandraisam-bahinintsika, izy rehetra dia avy amin'ny famokarana. Isan-taona dia mamoaka fomba vaovao 500-1000 ho an'ny mpanjifanay izahay.
❊Ny vokatray dia hosedraina amin'ny laboratoara JianEr .Misy fitaovana fanandramana matihanina marobe ho an'ny fitsapana Din, fitsapana am-pahefana, fitsapana fanadalana, fanandramana flexural, fitsapana fanoherana mavo, sns.
❊Tamin'ny taona lasa dia mamolavola ny kolontsain'ny orinasanay koa izahay, ny orinasa dia tarihin'ny teboka mazava. Ny fomba fijerinay dia: mifikitra amin'ny foto-kevitra momba ny serivisy "Five Heart" momba ny "fitiavana, mitandrina, manam-paharetana, tso-po, tompon'andraikitra", mandresy -ny fifandraisana amin'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny mpanjifantsika. Manantena ny fiahianao tsara izahay.
CompanyJianEr Shoes Company orinasa mpamokatra kiraro matihanina. mampiasa tsipika famokarana mandeha ho azy sy ny tsipika famokarana manavao isika. Toy ny milina fanapahana solosaina, milina fanjairana solosaina, milina boaty mitambatra mandeha ho azy, sandry mekanika mandeha ho azy, sns. Ny tsenanay lehibe dia i Eoropa, Amerika ary Azia. Manolotra serivisy fitadiavana fiatoana iray ho an'ny mpanjifa manerantany. Mba hahafahana mifehy sy miantoka ny kalitao dia miasa izahay ekipa. Manana atrikasa famokarana manokana izahay, atrikasa santionany, sampana R&D, ekipa mpamorona, ekipa QC, ekipa fivarotana ary departemanta fitiliana.